I-Suchitoto - I-Airbnb
San Bartolome Perulapia, San Salvador Department, El Salvador
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRebeca
Indlu esemaphandleni efudumeleyo eyihafu yeyure ukusuka eSuchitoto ukuze wonwabele kunye nosapho okanye abahlobo, ipuli kunye ne-jacuzzi, ikhitshi, igumbi lokutyela, i-grill, inkundla yebhola yeCreole, igumbi lokuhlala, itafile yepuli, igumbi lokuhlambela eliyi-1 ngaphakathi elineminyango esetyenziswa nangabanye abantu kunye ne-2 epheleleyo kwindawo engaphandle kwepuli, igadi enkulu.
I-Smart TV, ISIBHAKABHAKA kunye neentambo ezinamajelo eemuvi.
Inenkonzo yokucoca kwindawo yasekuhlaleni kwaye inkonzo yokucoca iyafuneka kwindawo yamagumbi, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
I-Quinta Caremango yindlela ethe cwaka kakhulu eya kwidolophu yaseSuchitoto.
Inamagumbi ayi-2 aneebhedi eziyi-4 kwigumbi ngalinye kunye negumbi lezinto eziluncedo, ukongezelela kwikhitshi layo elinento yonke: umatshini wokwenza ikofu, i-blender, i-toaster oven, i-crockery yabantu abayi-12, iiglasi kunye nezinto zasekhitshini.
Ineintanethi kunye neentambo ze-premium ukongezelela kwi-Smart TV ukuze ukwazi ukufikelela kwiiakhawunti zakho ze-Netflix, i-youtube, i-spotify, njl njl. Ukongezelela kwi-sky cable enazo zonke iziteshi zemidlalo
Inendawo yokoja yangaphandle kunye ne-laptop.
Ukongezelela, ipuli ine-volleyball net kunye ne-hoop ye-basketball.
Imozulu intle kakhulu kwaye ipholile kakhulu emini nasebusuku
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, iibhedi ezincinci eziyi-2
I-Quinta Caremango ikwisithuba seyure ukusuka eSan Salvador phakathi kweSan Martin nePerulapía nemizuzu eyi-20 ukusuka eSuchitoto endleleni.
Kwisixeko sasePerulapía ungatyelela iChurch of the Black Christ ukuze ubone izinto ezikhoyo e-Esquipúlas.
Umbuki zindwendwe ngu- Rebeca
UQuinta Caremango unenkonzo yokucoca kwindawo yentlalo esele iqukiwe kwindawo yokuqesha kwaye ukuba iyafuneka kwangaphambili inkonzo yokucoca kwindawo yamagumbi, igumbi lokuhlambela nekhitshi ngeendleko ezongezelelweyo.
Ukongezelela, kukho amaziko kwindawo apho unokuthenga khona ukuba kukho izinto ozidingayo
UQuinta Caremango unenkonzo yokucoca kwindawo yentlalo esele iqukiwe kwindawo yokuqesha kwaye ukuba iyafuneka kwangaphambili inkonzo yokucoca kwindawo yamagumbi, igumbi lokuhlambel…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 09:00 - 18:00